ASSOCIATE OF CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION GROUP Co., LTD.
Senior President’s Statement
ACE Group of Companies Organization Structure
ACE Construction Group Organization Structure
Myanmar Parliament Buildings Complex
Ministry for Government
Review Parade Building
Pyinmana Common Office
Hluttaw Staff Housing Nyar Na Theiddhi Housing
Sanga Generalist Hospital
Aung San Stadium, Yangon
Da Ma Yeit Thar
Rose Flower Round About
Ingyine Round About
Kank Kaw Round About
Kumudra Round About
Khwernyo Round About
Tathing Mhwe Round About
Zezawar Round About
အေစီအီး ဆောက်လုပ်ရေးအုပ်စုကို ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပုသိမ်မြို့တွင် Senior President U Tint Hsan မှ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည် ။ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူပေါင်းပြီး ၁၉၉၃ ခုနှစ်အထိ လက်တွဲညီညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်အထိ ရန်ကုန်မြို့၏ အိမ်ရာစီမံကိန်းများ ၊ နိုင်ငံတကာဟိုတယ်များ ၊ နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ အစိုးရစီမံကိန်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု စီမံကိန်းများကိုဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်နောက် ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ကို​ရွှေ့ပြောင်းပြီး အဓိက လုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။......
Senior President U Tint Hasn သည်အေစီအီး ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ရန်ဆုံး ဖြတ်သည့်အချိန်တွင် သူ၏အိမ်မက်သည် မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် သူ၏ဇာတိမြို့ဖြစ်သော ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ပုသိမ်မြို့ကို ပိုမိုတိုးတက်စေချင်ခဲ့သည်။ဧရာဝတီတိုင်း သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိသော အလှပဆုံးဒေသများထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ရွာငယ်လေးများစွာရှိပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်း အားနည်းသည့်အတွက်ကြောင့် အေစီအီး ကုမ္ပဏီ သည် မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အခြေခံအဆောက်အဦးများဖြစ်သည့် သူနာပြုသင်တန်းကျောင်းများ၊ ပြည်သူဆေးရုံတိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောက်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။........
၁၉၉၃-၂၀၀၃ တွင် A.C.E ဆော်လုပ်ရေးအဖွဲ့မှ ထင်ရှားသော လုပ်ငန်းများမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုရင်္ဂဗိုလ် သကြား စိက်ရုံ တည်ဆာက်ရေးလုပ်ငန်းကြီး (၂ခု) ၊ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနမှ မန္တလေးတိုင်း၊ မတ္ထီလာမြို့ တွင် မြေဧရိယာ အကျယ်အဝန်း (၁၁၆.၈) ဧကပေါ် ၌ မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့် အာကာသပညာ တက္ကသိုလ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ မန္တလေးတိုင်း ၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ် မန္တလေးမတ္တရာ ကား လမ်းဘေးမြေအကျယ်အဝန်း (၁၁.၄၂) ဧကပေါ် တွင်တိုင်းရင်းသားဆေးတက္ကသိုလ်တည် ဆော်ရေးလုပ်ငန်းတို့အား အောင်မြင်စွာတည်ဆောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း A.C.E ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့သည် နေပြည်တော်တွင် ပြောင်းရွှေ့ပြီး မြေအကျယ်အဝန်း (၈၁၄)ဧကပေါ် ၌မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လုပ်ငန်းကြီးတစ် ခုဖြစ်သည့် လွှတ်တော်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကြီးအား အောင်မြင်စွာတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အတူ နေပြည်တော်ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးဝန် ကြီးဌာနရုံ ၊ စားရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ စသည့်အဆောက် အဦးများကိုလည်း ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါ သည်။...
A.C.E ဆောက်လုပ်ရေး၏ ရည်ရွယ်ချက်များ
အကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲမှု ၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုများ ဖြင့်စီမံကိန်းကို သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတွင်း ပြီးစီးရန်။
နောက်ဆုံးပေါ် နည်ပညာများနှင့် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး ရရှိရန် တည်ဆောက်ခြင်း။
သင့်တော်သော စျေးနှုန်း အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတို့ဖြင့် သုံးစွဲသူများ မျှော်မှန်းထားသည့် အတိုင်း ဖြစ်လာစေရန်။
သုံးစွဲသူစိတ်ကျေနပ်မှု ရရှိစေခြင်းသည် အဓိကအရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ၀န်ဆောင်မှုများအကြောင်း
ACE Construction Company သည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အမျိုးမျိုးသော အဆောက်အဦး ဗိသုကာ ပညာရပ်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေသော အင်ဂျင်နီယာ နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှုများကို ပိုင်ဆိုင်ပါသည် ။ လက်ရှိ၀န်ဆောင်မှုပေးနေသော လုပ်ငန်းများ မှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည် ။
အဆောက်အဦ ပုံစံရေးစွဲခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း။
စီမံကိန်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ် ကို အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပေးခြင်း။ (လိုအပ်သောပစ္စည်းများ ၊ ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကြမ်းများ၊ အလုပ်သမားစရိတ်များ အပါအဝင် အတိအကျတွက်ချက်ပေးခြင်း)
ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် မြေမျက်နှာပြင်အနေအထား ပြုပြင်ခြင်းနှင့် မြေတိုင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။
တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်း (သံကူကွန်ကရစ် ဖြင့်တည်ဆောက်မှု ၊ သံမဏိဖရိန်ဖြင့် တည်ဆောက်မှု)
ရေနှင့်မိလ္လာစနစ် သွယ်တန်း တပ်ဆင်မှု
အဆောက်အဦစစ်ဆေးခြင်း(QA/QC) နှင့် လုံခြုံစိတ်ချဘေးအန္တရယ် ကင်းရှင်းမှု အတွက် ဆောင်ရွက်မှု။
အမှန်တရား နှင့် ရိုးသားခြင်း
ကျွန်တော်တို့သည် အစစ်အမှန်သမားများဖြစ်ပြီး မှန်ကန်စွာနှင့် ရိုးသားစွာ လုပ်ကိုင်နေကြသူများဖြစ်သည်။ကျွန်တော်တို့ သည်သုံးစွဲသူများ ၊ စီးပွားဘက်များ ၊ ဝန်ထမ်းများအပေါ် တွင် သစ္စာရှိ သူများဖြစ်သည်။ ဤအချက်များသည်ပင် ရေရှည်စီးပွားရေး တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှု နှင့် စိန်ခေါ်မှု များကို ကျော်လွှားနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသူများ ဖောက်သည်များ ဝန်ထမ်းများ အပေါ်တွင် လေးစားရိုသေမှု ရှိသောကြောင့် အခြားသူများထက်ပို၍ အောင် မြင်မှု ကို ရရှိစေ သည်။ ဤအချက် သည် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောက်ရွက် မှု အခွင့်အာဏာ ကိုရရှိစေပြီး ယုံကြည်မှု နှင့် ပြင်းပြသော စိတ်ဆန္ဒတို့ကြောင့် ခိုင်မာတောင့် တင်းသော စီးပွားရေး တည်ဆောက်နိုင် မှု နှင့် အားကောင်းသော စီးပွားရေး အဆက်အသွယ် များကို ရရှိ စေခဲ့ သည်။
ကတိ ၊ တာဝန်
ကျွန်တော်တို့သည် လုပ်ငန်းများ စတင်လုပ်ဆောက်သည့် အချိန်မှ စ၍ ကျွန် တော်၏ ကမ္ဘာကြီးနိုင်ငံနှင့် ပြည်သူပြည်သားများ ၊ ကျွန်တော် တို့ ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များနေထိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ပက်သတ်၍ ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သည့် တာဝန် ယူမှု တာဝန်ခံမှု ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့သည်ဘဝကိုအလုပ်ထဲတွင် စွဲမြဲစွာ မြုပ်နှံထားပြီး လူသားအရင်းမြစ်တို့၏ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် တာဝန်ယူမှု ရှိပြီး နေ့စဉ်နှင့်အ မျှ ပိုမိုတောင့်တင်းခိုင်မာအောင်ပြုလုပ်ပေးလျှက်ရှိသည်။
သတ္တ သတ္တာဟ မဟာဗောဓိစေတီတော်
A.C.E ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့သည် နေပြည်တော်တွင် အခြားသောစီမံကိန်းများအပြင် ဗုဒ္ဓသာသနိက အဆောက်အဦများကိုလည်း တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အထဲတွင် သတ္တသတ္တာဟ မဟာဗောဓိစေတီတော်နှင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်က စံမြန်းသတင်းသုံးခဲ့သောနေရာ (၇)ဌာန သံဝေဇနိယ လေးဌာန
- ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရားဖွားမြင်တော်မှုရာ
- ပဉ္စဝဂ္ဂီငါးဦးအား တရားဦးဟောရာနေရာ...
Parliament Buildings Complex
A.C.E ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီသည်အစိုးရနှင့်ရင်းနှီးမှုရရှိခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း မြို့တော် အသစ်နေပြည်တော် တည်ဆောက်ရာ တွင်ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းရှင်းများတွင် အရေးပါဆုံးဖြစ်လာခဲ့သည်။ A.C.E ကုမ္ပဏီ မှ ဆောက်လုပ်ခဲ့ သောနေပြည်တော်ရှိ ထင်ရှားသော အဆောက်အဦးများစွာထဲတွင် ပါလီမန် အဆောက်အဦး သည်လည်း တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်ပြီး ပုဂံအနော်ရထားမင်းခေတ် ခမ်းနားသော အနုပညာ လက်ရာများအတိုင်း ဖန်တီးပုံဖော်ထားသည့် အတွင်းပိုင်း ပြင်ဆင်မှုများပါဝင်သည်။
A.C.E ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ သည် ဇေကမ္ဘာပြတိုက်ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ခရေပင်လမ်းတွင် ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီလမှ စတင်၍ တည်ဆောက်နေပြီး အဆောက်အဦမှာ V ပိုင်ရိုက်အုတ်မြတ် နှင့် သံကူကွန်ကရစ် အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်ဗိသုကာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ဒီဇိုင်းထုတ်ကာ ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြတိုက်ဝန်းကျင် ရှိမြေ အကျယ်အဝန်း သုံးဧကခန့်မှာ လည်းစီးမံကိန်းအတွက် လျာထားပြီးတည်ဆောက်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ရန်ကုန့်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မီတီ Y.C.D.C ထံမှ စောင့်ဆိုင်း လျက်ရှိပြီး စီးမံကိန်းကို ၁၂လ အတွင်းအပြီးသတ်တည်ဆောက်ရန် သတ်မှတ်ထားသည်။
A.C.E ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီသည် နေပြည်တော်ရှိအဓိကဆေးရုံများထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်သော ဇမ္ဗူသီရိဆေးရုံကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဤအထူးကုဆေးရုံသည် လုပ်ငန်းသဘာဝ နှင့် ကိုက်ညီးအောင်လိုက်လျောညီထွေရှိအောင် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု နှင့် နောက်ဆုံး ပေါ်ဆေးဝါး ၊ ကုသမှု နှင့်ပတ်သက်သောပစ္စည်းများကို စနစ်တကျ တပ်ဆင်တည်ဆောက်ပေး ထားသည်။ ...
The Hotel Royal ACE ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၃ တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်၍ ကြယ်ငါးပွင့်ရဟိုတယ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပြီး ဇိမ်ခံဟိုတယ်များစုဝေးနေသည့်ဟိုတယ်ဇုံတွင်တည်ရှိသည် ဧကတစ်ကျယ်ဝန်းသော မြေပေါ်တွင် ခေတ်မှီဒီဇိုင်းနှင့် ရိုးရာပုံစံတို့ကို အချိုးကျကျ လှပစွာပေါင်းစပ်တည်ဆောက်ထားပြီး သာယာလှပသော ပန်းဥယျာဉ်များလဲ ဝိုင်းရံလျှက်ရှိသည်။ ...
Grand ACE Villa သည် ACE ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့မှ အစအဆုံးပုံစံထုတ်တည်ဆောက် ထားသော အဆင့်မြင့်ဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လှပသေသပ်၍ သက်တောင့်သက်သာ ရှိသော အခန်းများတွင် အဆင့်အတန်းမြင့်မားသော ဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးမှုများဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ကြောင့်စီးပွားရေးကိစ္စဖြင့် ခရီးသွားလာသူများအတွက် အလွန်အဆင်ပြေစေပါသည်။ ဧည်သည့်များ ရေးရှည်တည်းခိုနေထိုင်နိုင်ရန်အတွက် လည်းတိုက်ခန်းတွဲ(၁၂) ခန်းပါသော အဆင့်မြင့်အိမ်ရာ (၄) လုံးလည်းဆောက်လုပ်ထားပါသည်။ ...
" ACE ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမည့်သူများကို ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ "
ACE ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ငန်းနယ်ပယ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောက်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည် ။ နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး ကဏ္ဍများ များ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် အစိုးရနှင့် လက်တွဲပူးပေါင်း၍ ပုဂ္ဂလိက အခန်း ကဏ္ဍ တွင် တစ်ထောင့် တစ်နေရာမှ ပါ၀င် ဆောက်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ACE Construction Group ၏ရည်မှန်းချက်မှာ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများ ထံသို့ အရည်အသွေး စံချိန်စံနှုန်း ပြည့်၀သော၊ သေသပ်လှပ ခိုင်ခံ့သော လက်ရာလက်သား ကောင်းမွန်သော အဆောက်အဦများကို သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတိုင်းအတာအတွင်း လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ ဆောက်လုပ်နိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ...
" ACE ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီနှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ရန် ကန်ထရိုက်တာများကို ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည် ။ "
ACE ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ငန်းနယ်ပယ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောက်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည် ။ နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး ကဏ္ဍများ များ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် အစိုးရနှင့် လက်တွဲပူးပေါင်း၍ ပုဂ္ဂလိက အခန်း ကဏ္ဍ တွင် တစ်ထောင့် တစ်နေရာမှ ပါ၀င် ဆောက်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ လက်သမား၊ ပန်းရံ ၊ သံချည် သံကွေး ၊ သံထည် ၊ မျက်နှာကျက် ၊ ဆေးသုတ် ၊ ရေ ၊ မီး ၊ အခြားလုပ်ငန်း များကို လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်း ဆောင်ရွက်နေသော ကန်ထရိုက်တာများနှင့် လုပ်ငန်းအတွဲ အလိုက် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နိုင်သော ကန်ထရိုက်တာများအတွက် ACE Construction Company တွင် အထူးသတင်းကောင်း တစ်ရပ် ရှိပါသည် ။
" ACE ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီနှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ရန် ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာများကို ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ "
ACE Construction Company ကို ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှစ၍ ပုသိမ်မြို့တွင် မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာများ စုဖွဲ့မှုကို အခြေတည်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်သားများကို စုစည်းကာ နာယကကြီးမှ စတင်ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။ ACE Construction Company ကို ဦးစီးတည်ထောင်သူ ကိုယ်တိုင်မှာလည်း Profession Engineer, ASEAN Chartered Professional Engineer ဘွဲ့ရထားပြီး ကျွမ်းကျင် အင်ဂျင်နီယာ (၂၀၀) ကျော် ကျွမ်းကျင် ဝန်ထမ်း (၁၀၀၀)ကျော် စုစုပေါင်း ဝန်ထမ်း (၁၂၀၀)ကျော်ဖြင့် ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ထားသော Company ဖြစ်ပါသည်။ ...
" Central Naypyitaw Complex တည်ဆောက်ခြင်း ၊ ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း လုပ်ငန်း "
ACE Construction Group( 19-09-2019) Share on Facebook
Central Naypyitaw Complex တည်ဆောက်ခြင်း ၊ ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း လုပ်ငန်း....
ACE Hotels and Tourisim Group
ACE Machinery Group
Myanmar Businet Development
No.5, Shwe Thitsar Road ,
DekkhinaThiri Township ,
Nay Pyi Taw Myanmar.
Tel : +95 67 8100104 Fax : +95 67 8100105
ACE Construction Group Services
Civil Work and Steel Structure Work
Interior Decoration Work and M & E ( Electrical ) Work
Landscaping Work and Electrical Work
Air Conditioning Work and Water Supply Work
Audio & Visual Work and Firefighting Work
Copyright © 2016 ACE Construction Group Co., Ltd. All rights reserved | Design by Myanmar ITC